PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: September 2009
၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက် ဂျပန် တိုကျိုလှုပ်ရှား...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှု မှတ်တမ...
AUN-Japan စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည့် နောက်ခံဖြစ်စဉ် အမှတ်,...
Protesters Throw Shoes at Military Regime's Foreign Minister (VOA Burmese)
စစ်အဏာရှင် ၀န်ကြီး ဖိနှပ်ပြစ်ပေါက်ခံရ။
နယူးယောက်မြို့မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများရဲ ထိရောက်စွာ ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားနိူင်လိုက်သည့်အတွက် အထူးလေးစားပါတယ်။
မှတ်တမ်း ဗီဒီယို (ဗီအိုအေ . မြန်မာ)
(၇၀)ကြိမ်မြောက် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်( ပြည်ပ ဂျပန် )က ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
CRPP ဖွဲ့ စည်းတည်ထောင်ခြင်း(၁၁)နှစ်ပြည့် နှင့် (၂၁)နှစ်ပြည့် NLD တည်ထောင်ခြင်း အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကို NLD-LA(JB) မှ ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး(၂)နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား နှင် ဂျပန်သတင်းထောက် Nagai Kenji san အောက်မေ့ဘွယ် ဆုတောင်းပွဲ အခမ်းအနားကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ (JAC) ဦးဆောင်ကျင်းပပြီး ဂျပန်ရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ နှင့် ဂျပန်အဖွဲ့ အစည်းများ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါသည်။
ဓါတ်ပုံ, Ko pour
Posted by PNSjapan at 1:40 AM0comments
ရှစ်လေးလုံး အထိမ်းအမှတ် နှစ်ပတ်လည် ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲ (တိုကျို)
၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၈)ရက် အနှစ် (၂၁)ပြည့် ရှစ်လေးလုံး အထိမ်းအမှတ် ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲ (တိုကျို)။
၂၀၀၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၈)ရက် အနှစ် (၂၀)ပြည့် ရှစ်လေးလုံး အထိမ်းအမှတ် ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲ (တိုကျို)။
၂၀၀၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၈)ရက် အနှစ် (၁၉)ပြည့် ရှစ်လေးလုံး အထိမ်းအမှတ် ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲ (တိုကျို)။
Posted by PNSjapan at 11:52 AM0comments
(၃၆)ကြိမ်မြောက် စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုနေ့ အခမ်းအနားကို ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ - TSYO
Palaung National Society( Japan) နှင့် National Democratic Front (Burma) (NDF) Representative for Japan လှုပ်ရှာမူမှတ်တမ်း
မြန်မာနိူင်ငံမှာ စစ်အဏာရှင်စနစ် ချုပ်ငြိမ်းပြီး ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် အနာဂတ်ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး အတွက် ဂျပန်နိူင်ငံရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ တိုင်းရင်းသား အင်အားစုများ နှင့် အတူ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ တပ်ပေါင်းစု(မဒတ) ဂျပန် ကိုယ်စားလှယ် တာဝန်နှင့် ပလောင်အမျိုးသားများအဖွဲ့ (ဂျပန်) မိမိတို့၏ အမျိုးသားများ ကိုယ်စား မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးမှာ ပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ့နိူင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အားပေး ထောက်ခံမူများ ရရှိလာစေရန်အတွက် ဂျပန်အစိုးရ တာဝန် ရှိသူများ နှင့် လွတ်တော်အမတ်များ နိူင်ငံခြား သံတမန်များတို့ ကို သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ဂျပန် လွတ်တော်အမတ်များ နှင့် နိူင်ငံခြားရေးဌာနများ နိူင်ငံခြားသံတမန်များ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည့် (မှတ်တမ်း)
ဂျပန်ရောက် တိုင်းရင်းသားရင် အားစုများ နှင့် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ ပူးပေါင်း လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ၂၀၀၀ ခုနှစ် မှ - ၂၀၀၉ ခုနှစ် အတွင်း (လှုပ်ရှားမှု မှတ်တမ်း)
ဂျပန်ရောက် တိုင်းရင်းသားရင် အားစုများ နှင့် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ ပူးပေါင်း လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ၂၀၀၉- ၂၀၁၀ (မှတ်တမ်း)
ဂျပန်ရောက် တိုင်းရင်းသားရင် အားစုများ နှင့် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ ပူးပေါင်း လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် "၂၀၁၁- ခုနှစ် " (မှတ်တမ်း)
(PNS-Japan/ NDF (Burma)Representative for Japan)
81 90 9831 7192/ 8135960 4440
Labels: ဓါတ်ပုံ, မှတ်တမ်း
( Japan Association for Refugees ) and ( Association of United Nationalitirs in Japan ) Leadership Workshop ,
5th,6th September 2009 .
5th September 2009 ,
6th September 2009 ,
Recycle Center Takaanobaba(26.7.2009)
Posted by PNSjapan at 8:58 PM0comments
Ethnic Human Rights Committe (Japan)၏ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ကိုးရီးယားနိူင်ငံ လူ့ အခွင့်အရေး ညီလာခံအခမ်းအနား ခရီးစဉ်။
Ethnic Human Rights Committee (Japan) ပေါ်ပေါက်လာပုံ။
တိုင်းရင်းသားဒေသ အသီးသီး၌ လူအခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုများကို ပိုမို ထိရောက်စွာ ဖေါ်ထုတ် သွားနိူင်ရန်အတွက်၂၀၀၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁၂)ရက်နေ့ တွင် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းများအဖွဲ့အစည်း(ဂျပန်)အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ အစည်း ဝေး ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ တိုင်းရင်းသား လူအခွင့်အရေးကော်မတီ(ဂျပန်) Ethnic Human Rights committee(Japan) ကို AUN-Japan ၏ ကော်မတီတခုအဖြစ် အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးစီပါoင်ပြီးဖွဲ့ စည်းခဲ့ပါသည်။
Ethnic Human Rights Committee (Japan) ရည်ရွယ်ချက်။
၁။ တိုင်းရင်းသားဒေသ အသီးသီးမှလူ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုမှန်သမျှကို ကမ္ဘာကသိအောင် ဖေါ်ထုတ်သွားမည်။
၂။ လူ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်ခံနေရသူများဘက်မှလဲ အတတ်နိူင်ဆုံး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးရန်။
၃။ နိူင်ငံတကာ လူအခွင့်အရေး ကူညီ စောင့်ရှောက်သူများအဖွဲ့ နှင့်လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ပြီး လူ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်ခံဒေသသို့့ကူညီပံ့ပိုးမှု ရရှိနိူင်အောင် ကြိုးစားစောင်ရွက်သွားရန်။
International Parliamentarians’ Coalition for North Korean Refugees and Human Rights ( IPCNKR )ညီလာခံခရီးစဉ်
၂၀၀၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက် မှ ၂၆ ရက်နေ့ ထိ KOREA နိူင်ငံ၌ (၅)ကြိမ်မြောက် မြောက်ကိုးရီးယား ဒုက္ခသည်များ နှင့်လူ့ အခွင့်အရေးများအတွက် နိူင်ငံတကာပါလီမန်အမတ်များ ( IPCNKR ) ၏ ညီလာခံအခမ်းအနားကို တက်ရောက်ခဲ့ကြသည့် တိုင်းရင်းသား လူ့ အခွင့်အရေးကော်မတီအဖွဲ (ဂျပန်)မှ တိုင်းရင်းသားဒေသအသီးသီးအတွင်း လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ခံနေရမှုများအခြေအနေနှင့် ပြည်ပ၌ လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ခံနေရမှုများကို တင်ပြနိူင်ခဲ့ကြပါသည်။
IPCNKR အဖွဲ့ သည် မြောက်ကိုးရီးယားဒုက္ခသည်များ ကူညီဆောက်ရှောက်နိူင်ရန်အတွက် ဖွဲ့ စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ် မှစတင်၍ အာရှ နိူင်ငံအတွင်း လူ့ အခွင့်အရေးကိစ္စများ ပိုမိုဖြေရှင်း လုပ်ဆောင်သွားနိူင်ရန် တိုးချဲခဲ့ပါသည်၊ယခု ၅ ကြိမ် မြောက် ညီလာခံမှာ နိူင်ငံပေါင်း(၆၀)နိူင်ငံကျော်ထိ ပူးပေါင်းပါဝင်လာပြီး အင်အားကြီးမားသည့်လူ့ အခွင့်အရေးကော်မတီအဖွဲ့ ကြီးဖြင့်လာပါသည်။လာမည့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် တွင် မြန်မာနိူင်ငံ လူ့ အခွင့်အရေး နှင့် ဒုက္ခသည်များ၏အရေးကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ကူညီနိူင်ရန်အတွက် ထည့်တွင်းဆွေးနွေးသွားရန် တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
၂၆ ရက်နေ့ညနေ ၅ နာရီမှာ Kyounggi-Do မြို့ ရှိ NLD-La (Korea,Branch) မှ အလုပ်အမှုဆောင်များ အဖွဲ့ သားများကို ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ အစည်း(ဂျပန်)ကိုယ်စားလှယ်များမှ သွားရောက် တွေဆုံ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။
Ethnic Human Rights Committee ( Japan )
တိုင်းရင်းသားလူ့ အခွင့်အရေးကော်မတီ( ဂျပန်)
Posted by PNSjapan at 10:47 PM0comments
ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ အစည်း (ဂျပန်)၏ ဒီမိုကရေစီရေး နှင့် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိူင်ငံ တည်ဆောက်ရေး လှုပ်ရှားမှု မှတ်တမ်းများ။
AUN-Japan ၏ တိုင်းရင်းသားတန်းတူရေး ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်း
AUN နှင့် NCGUB ၀န်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာစိန်ဝင်း တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနား မှတ်တမ်း
AUN နှင့် NCUB အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည့် မှတ်တမ်း
AUN-Japan နှင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်များ ဧည်သည်တော်များ မှတ်တမ်း
Mai Kyaw Oo - PNS-Japan
(၆၀)နှစ်ပြည့်မြောက် ကမ္ဘာ့ လူ့ အခွင့်အရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ့်(တိုကျို)
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက် (၆၀)နှစ်ပြည့်မြောက် ကမ္ဘာ့ လူ့ အခွင့်အရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲ (မှတ်တမ်း)
Posted by PNSjapan at 10:10 AM0comments
(၂၁)နှစ်ပြည့် အာဏာသိမ်း စစ်အုပ်စု ရှုတ်ချကန့် ကွက်ဆန္ဒပြပွဲ(တိုကျို)
(၂၁)နှစ်ပြည့်မြောက် အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုအား ရှုတ်ချကန့် ကွက်ဆန္ဒပြပွဲ
၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ( ၁၈ ) ရက်(၂၁)နှစ်ပြည့်မြောက် အာဏာသိမ်း စစ်အုပ်စုအား ရှုတ်ချကန့် ကွက်ဆန္ဒပြပွဲ အခမ်းအနားကို တိုကျို ရှိနာဂါဝါမြို့ နယ် နအဖ စစ်အခွန်ရုံးရှေ့ မှာ ဂျပန်ရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများမှ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြ ပါသည်။
ဆန္ဒပြပွဲ အခမ်းအနားကို ညနေ ၂း၀၀ နာရီ မှ ၄း၀၀ နာရီ အထိ ကျင်းပပြု လုပ်ပြီး အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးမှ စုစုပေါင်းအင်အား ၁၈၀ ၀န်းကျင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
(ဧရာဝတီ နှင့် ခေတ်ပြိုင်) ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှာ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလ(၂၄)ရက်နေ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲနှင့် စစ်အခွန်ရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြပွဲ။
PNS-japan/ NDF(Burma)REp; Jp...
၂၁ နှစ်ပြည့်မြောက် မြန်မာ့လူ့ အခွင့်အရေးနေ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲ
၂၀၀၉ ခုနှစ် မတ်လ (၁၃) ရက်နေ့၂၁ နှစ်ပြည့်မြောက် မြန်မာ့လူ့ အခွင့်အရေးနေ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲ (တိုကျို ဂျပန်)
၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလ (၁၀)ရက် နေ့ ဂျပန်နိူင်ငံ တိုကျိုမြို့မှာ ရွှေဂုံတိုင်ကြေငြာစာတမ်းထောက်ခံပွဲ အခမ်းအနားအောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲကြပါသည်။
PNS-Japan/ NDF(burma)Rep; Jp
ကိုးကန့် အမျိုးသားနယ်မြေအတွင်း နအဖ တပ်များ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသည့် လုပ်ရပ်ကို ရှုတ်ချကန့် ကွက်သည့် ဆန္ဒပြပွဲ(တိုကျို)
ယနေ့နေ့လည်၃နာရီမှ၎နာရီအချိန် ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ ရှိနာဂါဝါ မြို့နယ် နအဖအခွန်ရုံးရှေ့တွင်ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ဩဂုတ်လ၂၇ရက်မှ၂၉ရက်ထိ နအဖစစ်တပ်
နှင့်ကိုးကန့် တပ်များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နအဖစစ်တပ်၏ ကျုးကျော်မှုကိုရှုတ်ချရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဤဆန္ဒပြပွဲ ကိုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ မိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်နေသည့်ကြားမှပင် ဤဆန္ဒပြပွဲသို့ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ၎င်း၊မြန်မာ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ၎င်းစုစုပေါင်းအင်အား၄၀ခန့်ပါဝင်ပူးပေါင်းခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာလူမျိုးစုများ ဒီမိုကရေစီမဟာမိတ် တပ်ပေါင်းစု (MYANMAR NATIONAL DEMOCRACY ALLIANCE ARMY) သည်၁၉၈၉ခုနှစ်တွင် မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက် ရှိခဲ့သော်လည်း နအဖအစိုးရ ဖက်မှ ကတိဖျက်ကာ ကျုးကျော် တိုက်ခိုက်ရာ မှ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ရပါသည်။ ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာ့တိုင်းရင်းသား
ကိုယ်စားလှယ်များကိုယ်စားNDF ဂျပန် ကိုယ်စားလှယ် မိုင်ကျော်ဦးမှ ယနေ့ ကျင်းပပြုလုပ်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ``ကတိမတည်သော နအဖ၏ လုပ်ရပ်မှာ ကိုးကန့် တခုတည်းကိုသာ မဟုတ်ပဲ အခြား အပစ်အခတ်ရပ်
စဲထားသောတိုင်းရင်းသား တပ်ဖွဲ့များကိုလည်း ကျုးကျော်ရာရောက်ကြောင်း ၊မိမိတို့ဖက်မှ ပြည်တွင်းစစ် မဖြစ်စေရန် ငြိမ်းချမ်းစွာ
ဖြေရှင်းလိုသော်လည်း စစ်အစိုးရသည် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ များအတွင်း သွေးကွဲအောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊ တဖွဲ့ကိုစည်းရုံး၍ အခြားတဖွဲ့ ကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခြင်း လုပ်ရပ်များကိုလုပ်ဆောင်နေကြောင်း ၊ စသည်တို့ ကိုရှင်းလင်းပြောကြားသွားပါသည်။ညနေ၄နာရိတွင် နအဖတပ်များဆုတ်ခွာပေးရန်၊ ကျုးကျော်စစ် ရပ်တံ့ပေးရန်၊ပြည်တွင်းစစ် ဖန်တည်းမှု အလိုမရှိစသည်တို့ကိုသံပြိုင်
(1) National Democratic Front (Burma) Representative for Japan, ( NDF(Burma)Rep;Jp )
(2) Karen National Union ( Representative for Japan ), ( KNU-Rep;Jp)
(3) Kachin National Organization-Japan, ( KNO-Japan )
(4) Karen National League,( KNL-Japan)
(5) Chin National Community-Japan,(CNC-Japan )
(6) Naga National Society-Japan, ( NNS-Japan )
(7) Palaung National Society-Japan, ( PNS-Japan )
(8) Punnyagari Mon National Society-Japan, ( PMNS-Japan )
(9) Arakan League for Democracy(Exile)Japan, ALD(Exile)Japan
(10) Shan Nationalities for Democracy-Japan, ( SND-Japan )
(11) Pa-O Nationalities Liberation Society-Japan, ( PNLS-Japan )
(12) Karenni ( Kayah ) National Society, ( Japan )
(13) Kachin State National Congress for Democracy, ( Liberated Area-Japan ), (KNCD-LA-JP)
(14) Kachin National Uplift Society, ( KNUS )
(15) Overseas Karen Organization-Japan, ( OKOJ )
(16) Shan State Nationalities for Democracy-Japan, ( SSND-Japan )
(1) Joint Action Committee of Burmese Community in Japan (JAC)
(2) NCUB- Representative for Japan
(3) National League for Democracy (Liberated Area) Japan Branch (NLD-LA-JB)
(4) League for Democracy in Burma (LDB)
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းအပေါ် ဂျပန်ရောက် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ ဆန္ဒပြပွဲ အခမ်းအနား
အင်းစိန် အထူးတရားရုံးမှာ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မတရားအမှုဆင်ပြီး စီရင်ချက်ချမည် ဆိုသောသတင်းကို ကြားသိရသောအခါ ဂျပန်ရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများက ဂျပန်နိူင်ငံ တိုကျိုမြို့ရှီနာဂါဝါရပ်ကွက်ရှိ မြန်မာစစ်အခွန်ရုံးရှေ့ တွင် နေ့ လည် ၁၂း၀၀ နာရီချိန်လောက် မှ စတင်စုစည်းပြီး တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသည်။
(နအဖ၀န်ထမ်း)တွေကိုဘာကြောင့် ဒီလိုမတရားစီရင်ချက်ချရတယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြပေးဖို့တောင်းဆို စစ်အခွန်ရုံးရှေ့ ထိုင်သပိတ်ဆင်နွဲ။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၂ရက် နယ်စပ်ဒေသ မှ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၂ရက်
နယ်စပ်ဒေသ မှ ရောက်ရှိလာသော တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ ၊ AUN-japan မှ တာဝန်ရှိ
ပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် ဂျပန်လွတ်တော်အမတ်များ နှင့် တွေ့ ဆုံစဉ် မှတ်တမ်း
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင်ကျရောက်သည့် ၆၁ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား ကို နှစ်စဉ် ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ အစည်း(ဂျပန်) AUN-Japan မှ နှစ်စဉ် ဦးဆောင် ကျင်းပလာခဲ့ရာ ယခုနှစ်မှစ၍ နှစ်စဉ် ကျင်းပခဲ့သည့်နှစ်များနှင့် မတူဘဲ ပြည်ထောင်စု အနှစ်သာရ ပိုမိုပေါ်လွှင်စေလို သဖြင့် နိူင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအဖြစ် ဖေါ်ဆောင်သွားနိူင်ရန် နှင့် ဂျပန်အစိုးရမှ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအရေး တိုင်းရင်းသားအရေးကိစ္စ များကို ပိုမိုသိရှိလာစေရန် အတွက် AUN-Japan မှ ပါဝင်ခဲ့ကြသည့် အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးတို့ သည် မိမိတို့လူမျိုးစုအလိုက် ခေါင်းဆောင် ကိုယ်စားလှယ်များကို တာဝန်ယူ၍ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြပါသည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ ( Dai2)လွတ်တော်ခမ်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည် အခမ်းအနားမှာ အထက်လွတ်တော် အောက်လွတ်တော် အမတ်များပါဝင်သည့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးကို ထောက်ခံအားပေးသော လွတ်တော်အမတ်များသမဂ္ဂအဖွဲ့ ၊ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဒုက္ခသည်နှင့် နိူင်ငံခြားသားများ၏ လူအခွင့်အရေးပြဿနာအား သုံးသပ်သော အမတ်များအဖွဲ့ ၊ မြန်မာစစ်အစိုးရအား စီစစ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့(၃)ဖွဲ့ တို့ နှင့် တွေ့ ဆုံးပြီး တိုင်းရင်းသားအရေးများကိုဆွေးနွေး တင်ပြနိူင်ခဲ့ပါသည်။
တက်ရောက်လာကြသည့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ မှ ဆွေးနွေးပွဲ အပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
ရက်စွဲ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၅)ရက်
အကြောင်းအရာ။ ။ ညီညွှတ်သောတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့အစည်း ( ဂျပန် ) Association
of United Nationalities in Japan (AUN-Japan) ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း တရားဝင် အသိပေး ခြင်းကိစ္စ
၁။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေကြသော မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အရေးအတွက် တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ ပါဝင်လှုပ်ရှားကြရာတွင် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ တို့သည်လည်း တူညီသော ရည်မှန်းချက်များအတွက် စုပေါင်းလှုပ်ရှားခြင်း၊ အချင်းချင်း သတင်းဖလှယ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးတိုင်ပင် သုံးသပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်လှပါသည်။
၂။ အနာဂတ်ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် စိတ်ဝင်စားသော ဂျပန်နိုင်ငံသားများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံအလုပ်သမား သမဂ္ဂများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လွှတ်တော်၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အရေး လှုပ်ရှားသောအင်အားစုများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာ တွင်လည်းကောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေကြသော တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံတို့၏ ကိုယ်စား ရပ်တည်သော ကော်မီတီအဖွဲ့အစည်းတရပ် လိုအပ်လျှက်ရှိနေပါသည်။ ထိုသို့ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် ၁၉၈၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိပြီး၊ ဖွဲ့စည်း လှုပ်ရှားလျှက်ရှိနေကြသော တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း များ၊ တသီးပုဂ္ဂလများ စုပေါင်းကာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၁)ရက်နေ့တွင် ညီညွှတ်သောတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်း ထူထောင်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
(၁) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ၏ စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကို ဖေါ်ဆောင်ရန်။
(၂) မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း လူ့အခွင့်အရေးပြည့်ဝစွာ ခံစားခွင့်ရရှိရေးနှင့် တိုင်းရင်းသား
လူမျိုးများ၏ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရန်။
(၃) ပြည်ပ၌ ဒုက္ခရောက်နေကြသော မြန်မာနိုင်ငံသားများကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီပံ့ပိုး
(၄) နိုင်ငံတကာ၌ ရောက်ရှိနေကြသော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း၊
အသိအမြင်ဖလှယ်ပြီး နိုင်ငံရေးအရ စည်းလုံးညီညွှတ်မှုရရှိရေးအတွက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်။
(၅) မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံရောက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံဖြင့်
ဖွဲ့စည်းထားသော ဤအဖွဲ့အစည်းသည် အခြားသော ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် တို့ဖြစ်ပါသည်။
ညီညွှတ်သောတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့အစည်း(ဂျပန်)တွင် တိုင်းရင်းသားများ၏ အလုပ်သမား သမဂ္ဂကော်မီတီများ၊ အမျိုးသမီးသမဂ္ဂကော်မီတီများ၊ စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ကော်မီတီများ လည်း ပါဝင် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
ပါဝင်သောအဖွဲ့အစည်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ (အခြားသောတိုင်းရင်းသား များလည်း ဆက်လက်ပါဝင်ကြဦးမည်ဖြစ်ပါသည်)
၁။ ကချင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့(ဂျပန်) – Democracy for Kachin National (Japan) –
၂။ ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(ဂျပန်) Karen National League(Japan) – KNL(Japan)
၃။ ချင်းတိုင်းရင်းများအဖွဲ့အစည်း(ဂျပန်) Chin National Community(Japan) – CNC(Japan)
၄။ နာဂအမျိုးသားများအဖွဲ့ (ဂျပန်) Naga National Society (Japan) – NNS(Japan)
၅။ ပလောင်အမျိုးသားများအဖွဲ့ (ဂျပန်) Palaung National Society (Japan) – PNS(Japan)
၆။ ပုညဂါရီမွန်အမျိုးသားများအဖွဲ့ (ဂျပန်) Punnyagari Mon National Society (Japan) –
၇။ ရခိုင်အမျိုးသားများအဖွဲ့ (ဂျပန်) Rakkhing National Society (Japan)
၈။ ရှမ်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့(ဂျပန်) Shan National for Democracy (Japan) – SND(Japan)
2-24-8 Higashi Ikebukuro
303 - Mezonmashuu kaku.,
Toshima-ku 170-0013 Tokyo, Japan .,
Tel/Fax - 03-5960-4440
Email - aunjp2003@yahoo.com
1. Peter Brang Saing -090-9935-3651
2. U Zaw Min Khaing -090-9200-3831
3. Saw Ba Hla Thein -090-2414-4605
4. Mai Kyaw Oo -03-5960-4440
5. Thang Nang Lian Thang -090-3048-8680
6. Min Myo Chit -090-2153-6126
7. U Myint Tun -080-3413-5577
8. Daw Saw Ohnmar -03-5960-4440
9. Ma Yin Yin @ Man Ngaih Hau -090-1884-4964
-- --- ---- --- ----- --- --- ---
ပေးပို့ခြင်းမှတ်တမ်း - ဂျပန်နိုင်ငံရှိ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများနှင့် ဂျပန်အဖွဲ့အစည်းများ၊
· ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ
· နိုင်ငံတကာရှိ ဒီမိုကရေစီအင်အားအဖွဲ့အစည်းများ
မူဝါဒ နှင့် နည်းဗျူဟာကော်မတီ
မူဝါဒ နှင့် နည်းဗျူဟာကော်မတီ ( Policy and Strategy Committee )။
ဤကော်မတီကို အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်စား အကြံပေးပ္ဂိုလ်များအဖြစ်၊ထားရှိခြင်းဖြစ်ပါသည် နောင်တွင် နိူင်ငံတကာတွင်ရှိသော တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များကိုလည်း ထည့်သွင်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ AUN စတင်တည်ထောင်သူများသည် ဂျပန်နိူင်ငံ၏ အခြေအနေအရပ်ရပ်နှင့် အခက်အခဲ့ များ ဖြတ်သန်းလာသည့် အတွေ့ အကြုံများကို AUN-CEC,AUN-EC,AUN-Sub Committee များသို့အကြံပေး ဦးဆောင်သွားရန်အတွက် ( ၂၀၀၆ ) ခုနှစ် မှစတင်၍ ဖွဲ့ စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Name Incharg for
1. U Zaw Min Khaing - Literature
2. Mai Kyaw Oo - Organization & Social welfare
3. Saw Ba Hla Thein - Culture and Entertainment
4. Peter Bran Seng - Education
5. Min Myo Chit - Information
6. Myint Htoon - Labour
7. Sai Nyunt Maung - Finance
8. Thang Nang Lian Thang - Research and Record
AUN-Japan အလှည့်ကျ သဘာပတိ ဇယား
Year - Chairperson - Co-chairperson - Co-chairperson(2)
2004 - Kachin(1) - Rakkhaing(1) - Karen(1)
( Peter Bran Seng ) ( U Zaw Khaing ) ( Saw Ba Hla Thein )
2005 – Karen (2) - Rakkhaing (2) - Chin (1)
( Saw Ba Hla Thein ) ( U Zaw Min Khaing) ( Than Naing Lian Than)
2006 – Chin (2) - Naga (1) - Palaung (1)
( Than Naing Lian Than) ( U Myint Htoon ) ( Mai Kyaw Oo )
2007 –Palaung (2) - Naga (2) - Mon (1)
( Mai Kyaw Oo ) ( U Myint Htoon ) ( Min Myo Chit )
2008 – Mon (2) - Palaung (3)- Shan (1)
( Min Myo Chit ) ( Mai Kyaw Oo ) ( Sai Se Wan )
2009 – Rakkhaing (3) - Mon (3) - Shan (2)
( U Zaw Min Khaing ) ( Min Myo Chit ) ( Sai Se Wan)
2010 – Shan (3) - Kachin (3) - Karen )3)
( Sai Si Wan ) (.............) (...............)
2011 – Kachin (...) - Chin (3) - Naga (3)
စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည့် နောက်ခံဖြစ်စဉ် အမှတ်(၁)
၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ ပေါ်ပေါက်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို စွန့်ခွာကာ နိုင်ငံတကာသို့ အသီးသီးရောက်ရှိကြပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိကြသော မြန်မာနိုင်ငံသားများတွင် နိုင်ငံရေးသမားများ ဘ၀လုံခြုံမှုအတွက် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရင်းနှင့် ရောက်ရှိနေသူများ၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီး ၀င်ငွေရှာလိုသူများ အမျိုးမျိုးကို တွေ့ရှိကြရပါသည်။
ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် လည်းကောင်း၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ် လှုပ်ရှားမှုများတွင်လည်းကောင်း လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင်လည်းကောင်း နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် အဖွဲ့အစည်းပုံစံအမျိုးမျိုှးနှင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် လှုပ်ရှားကြပါသည်။
ဂျပန်နိူင်ငံရောက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု အဖွဲ့အစည်းများသည် ဒီမိုကရေစီအရေး တိုင်းရင်းသားအရေး နှင့် စာပေယဉ်ကျေးမှုများ တို့ကို တသီးတခြားစီသာ လှုပ်ရှားလာခဲ့ကြသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာကြသော တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများသည်လည်း ဘ၀တူ ခံစားချက်တူ စိတ်သဘောတူ ဖွဲ့စည်းထားသည့် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ရပ် ဂျပန်တွင် မလွဲမသွေ ပေါ်ပေါက်ရန်လိုအပ်သည်ဟု အခိုင်အမာ ယုံကြည်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီအရေး တိုင်းရင်းသားအရေးနှင့် စာပေယဉ်ကျေးမှုများတို့ကို ပိုမိုထိရောက်စွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် သွားနိူင်ရန်အတွက် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များတို့ သည် အကြိမ်ကြိမ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးနောက် မိမိအမျိုးသားကိုယ်စား ရပ်တည်ပြီး ညီညွှတ်သောတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ အစည်း (ဂျပန်) Association of United Nationalities in (Japan) ကို၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၁) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင် ခဲ့ပါ သည်။
ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ အစည်းဖွဲ့ စည်းခြင်း
နိဒါင်း။ မြန်မာနိူင်ငံ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းပြီး ဒီင်္မိုကရေစီ အနှစ်သာရနှင့် ပြည့်စုံသော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိူင်ငံ တည်ဆောက်ရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားများ ညီညွတ်ရေးသည် လွန်စွာမှ အရေးကြီးလှပေသည်။အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်နှင့်တကွ ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ ကပါ မြန်မာနိူင်ငံတွင် အရှည်သဖြင့်ငြိမ်းချမ်း သာယာရေးအတွက် လက်ရှိအာဏာရ စစ်အစိုးရ၊ရွှေးကောက်ပွဲ့ အနိူင်ရပါတီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်နှင့်တကွ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သော အဖွဲ့ အစည်း သုံဦးသုံဖလှယ် ဆွေးနွေး အဖြေရှာမှသာ မြန်မာနိူင်ငံ၏ နိူင်ငံရေးပြဿနာကို ဖြေရှင်းနူင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
ထိုကြောင့် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ တိုင်းရင်းသားများသည် သုံပွင့်ဆိုင်တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေး အဖြေရှာနိူင်ရန်သော်လည်းကောင်း အနာဂတ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိူင်ငံ ပေါ်ထွန်းရေးနိူင်ရန် သော်လည်းကောင်း စည်းလုံညီညွတ်စွာဖြင့် တိုက်ပွဲဝင်တောင်းဆိုသွားရန် လွန်စွာမှပင် အရေးကြီးပါသည် ။ ပြည်ပတွင်ရောက်ရှိနေသော တိုင်းရင်းသားများသည်လည်း ပြည်တွင်း အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ဟန်ချက် ညီစွာ လှုပ်ရှားနိူင်ရန်အတွက် စနစ်ကျသော အဖွဲ့ အစည်းတရပ် ပေါ်ပေါက်ရန်လိုအပ်သည့်အလျှောက် ဂျပန်နိူင်ငံတွင်လည်း ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသား အဖွဲ့ အစည်းတရပ် ပေါ်ပေါက်ရန်မှာ မလွဲမသွေ လိုအပ်လာပါသည်။ ထိုအဖွဲ့ ဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပေသည်။
ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ အစည်းဖွဲ့ စည်းနိူင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ အစည်းများမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် မကြာခဏ အလွတ်သဘောတွေ့ ဆုံခြင်းဖြစ် လည်းကောင်း အစည်းအဝေးများ ခေါ်ယူတွေ့ ဆုံခြင်းဖြင့် ဤအသင်းဖြစ်မြောက်ရေးကို ကြိုးစားခဲ့ကြပါသည်။
ဖွဲ့ စည်းခြင်း ။
(က) ရည်ရွယ်ချက် ။ ။ ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ အစည်းကို အောက်ဖေါ်ပြပါ ရည်ရွယ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖေါ်နိူင်ရန်အတွက် ဖွဲ့ စည်းခဲ့ပါသည်။
(၁) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ၏ စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကို ဖေါ်ဆောင်ရန်။
(၂) မြန်မာနိူင်ငံသားတိုင်း လူ့ အခွင့်အရေးပြည့်ဝစွာ ခံစားခွင့်ရရှိရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏
လူ့ အခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရန်။
(၃) ပြည်ပ၌ ဒုက္ခရောက်နေသော မြန်မာနိူင်ငံသားများကို အတတ်နိူင်ဆုံး ကူညီပံပိုးမှုပြုလုပ်နိူင်ရန်။
(၄) နိူင်ငံတကာ၌ ရောက်ရှိနေကြသော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ အစည်းအခြင်းခြင်း အသိအမြင်ဖလှယ်
ပြီးနိူင်ငံရေးအရ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ရရှိရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရက်ရန်။
(၅) မြန်မာနိူင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် ဂျပန်နိူင်ငံရောက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံဖြင့် ဖွဲ့ စည်းထားသောဤအဖွဲ့ အစည်းသည် အခြားသော ဒီမိုကရေစီအင်အားစု အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် တို့ ဖြစ်ပါသည် ။
(ခ) ဖွဲ့ စည်းပုံအနေအထား ။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအလိုက် မိမိပါဝင်လိုသောနာမည်များဖြင့် ဆန္ဒပြုကြပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်
(၁) ဦးပီတာဘရန်ဆိုင်း (ကချင်) ကချင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ (ဂျပန်)
(၂) ဦးစောဘလှသိန်း (ကရင်) ကရင်အမျိုးသားများအဖွဲ့ ချုပ်(ဂျပန်)
(၃) ဦးထန်နန်လျန်းထန် (ချင်း) ချင်းတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ အစည်း(ဂျပန်)
(၄) ဦးမြင့်ထွန်း (နာဂ) နာဂအမျိုးသားများအဖွဲ့(ဂျပန်)
(၅) ဦးမိုင်ကျော်ဦး (ပလောင်) ပလောင်အမျိုးသားများအဖွဲ့ (ဂျပန်)
(၆) ဦးမင်းမျိုးချစ် (မွန်) ပုညဂါရီမွန်အမျိုးသားများအဖွဲ့ (ဂျပန်)
(ရ) ဦးဇော်မင်းခိုင် (ရခိုင်) ရခိုင်အမျိုးသားများအဖွဲ့ (ဂျပန်)
(၈) ဦးစိုင်းဆိုင်မောဝ် (ရှမ်း) ရှမ်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ (ဂျပန်)
(၉) ဒေါ်နန်းအိအိမွေး (လားဟူ) လားဟူအမျိုးသားများအဖွဲ့ (ဂျပန်) စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
လားဟူအမျိုးသမီးဖြစ်သော ဒေါ်နန်းအိအိမွေးသည် ဂျပန်နိူင်ငံတွင် မိမိတစ်ဦးသည်းသာ ရှိသော်လည်း ဒီမိုကရေစီလိုလားသော လားဟူအမျိုးသားများကိုယ်စား ရပ်တည်လိုသည့် အတွက်ကြောင့် လားဟူအမျိုးသားများအဖွဲ့ အနေဖြင့်ပါ ပါဝင်မည်ဟု ပြောကြားသည်ကို မှတ်တမ်း တင်ထားပါသည်။ သို့ သော်လည်းကျမ္မာရေးနှင့် လူမှုရေးအခက်အခဲများကြောင့် နောက်ပိုင်းတွင် ပါဝင်နိူင်ခြင်း မရှိတော့ပါ။ ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ အစည်းအနေ နှင့် လားဟူအမျိုးသားများ နောင်တွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားလိုပါက အဖွဲ့ ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နိူင်ရန်အတွက် လားဟူနာမည်ကို ယာယီအားဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားပါသည်။
(ဂ) တာဝန်ခွဲ့ ဝေမှု ။
ဥက္ကဌ ၊ တွဲဘက် ဥက္ကဌ(၁) ၊ တွဲဘက် ဥက္ကဌ(၂) ဟူ၍ သဘာပတိအဖွဲ့ ဝင်သုံးဦးဖြစ် ဖွဲ့ စည်းထားပါသည်။
တွဲဘက် ဥက္ကဌများထားရှိရခြင်းမှာ ဥက္ကဌကိုယ်စား လုပ်ပိုင်ခွင့်များ အပြည့်အ၀ရရှိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။အဖွဲ့ ၏ ဥက္ကဌကို မြန်မာအက္ခရာအစဉ်အရ တာဝန်ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပြီး တွဲဘက်ဥက္ကဌများကို အများဆန္ဒဖြင့် ရွှေးကောက်တင်မြောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အတွင်းရေးမှုးအဖွဲ့ ။အတွင်းရေးမှုးများအဖွဲ့ကို အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး၊ တွဲဘက်အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုး(၁)၊ တွဲဘက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး(၂)၊ တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး အများဆန္ဒဖြင့် ရွှေးချယ်တင်မြောက်မည်ဖြင့်ပါသည်။
အောက်ဖေါ်ပြပါ ရေးရာဌာနများကို ယာယီဖွဲ့စည်းထားပြီး အဖွဲ့ဝင်အင်အားပေါ် မှုတည်လျှက် ဆက်လက်တိုးချဲဖွဲ့ စည်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၅) ရုံးအဖွဲ့ ရေးရာ၊
အဖွဲ့ အစည်းတည်နေရာ ။
အဖွဲ့ အစည်းတည်နေရာကို ယာယီအားဖြင့် 303 Mezonmashuukaku,2-24-8 Higashi Ikebukuro,Toshimaku,Tokyo 170-0013 , Japan တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။
အဖွဲ့ ၏တံဆိပ်တုံး ။
အဖွဲ့ ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်၇ာတွင် တရားဝင်ဖြစ်စေရန်အတွက် အောက်ပါဖေါ်ပြ တံဆိပ်တုံးကို အဖွဲ့ ၏တရားဝင်တံဆိပ်တုံး အဖြစ်အတည်ပြုသည်။
(၁) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မြန်မာနိူင်ငံ၏ အမျိုးသားခေါင်ဆောင်အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
(၂) ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ရွှေးကောက်ပွဲတွင် ၈၀%ကျော်ဖြင့် အနိူင်ရရှိသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ကို မြန်မာနူင်ငံ၏ နိူင်ငံရေး ဦးဆောင်ပါတီအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
(၃) ပြည်သု့ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့ စည်းထားသော ပြည်သူ့ လွတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီကို ထောက်ခံသွာမည်။
(၄) တိုင်းရင်းသားပါတီများဖြစ်သော ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ( United Nationallities League for Democracy) နှင့် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားများ မဟာမိတ်အဖွဲ့( United Nationalities Alliance) တို့ ကိုထောက်ခံသည်။
(၅) တိုင်းရင်းသားကောင်စီဖြစ်သော ENC ( Ethnic National Council ) တို့ ကို ထောက်ခံပြီး ဦးဆောင်လမ်းညွန်မှုကို ခံယူသွားမည်ဖြစ်ပေသည်။လုပ်ငန်းကော်မတီဖြစ်သော ENSCC ( Ethnic Nationalities Solidarity and Cooperation Committee) ၏ လမ်းညွန်မှုနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများကို ခံယူသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၆) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု NDF (National Democratic Front) ၏ ဦးဆောင်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုလည်း ခံယူသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၇) ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်(လွတ်မြောက်နယ်မြေ) United Nationalities League for Democracy(Liberated Area) UNLD-LA ၏ ဦးဆောင်မှုနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်မည်။
(၈) မြန်မာနိူင်ငံအမျိုးသားများကောင်စီ National Council of the Union of Burma ( NCUB) ၏ လမ်းညွန်မှုကို ခံယူသွားမည်။
(၉) ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိူင်ငံညွန့် ပေါင်းအစိုးရ NationalCoalition Govemment of the Union of Burma (NCGUB) ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထောက်ခံပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၁၀) ဂျပန်နိူင်ငံရှိ မြန်မာ့ီးမိုကရေစီအရေးကို လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၁၁) နိူင်ငံတကာရှိ မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့ အစည်းများနှင့်လည်း ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၁၂) မြန်မာနိူင်ငံရေးနှင့် တိုင်းရင်သားများ၏အရေးကို စိတ်ဝင်စားသော နိူင်ငံတကာ အဖွဲ့ အစည်းများနှင့်လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤအဖွဲ့ ကိုထူထောင်သူများသည် မြန်မာနိူင်ငံတွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အပြီးတိုင် ဖျက်သိမ်းရေး ၁၉၉၀ပြည့်နှစ် ရွှေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အသိအမှတ်ပြုပြီး မြန်မာနိူင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိရေး အနာဂတ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိူင်ငံထူထောင်ရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားများ တန်းတူ လူ့ အခွင့်အရေး ရရှိရေးနှင့် ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ မှ ချမှတ်ထားသော သုံးပွင့်ဆိုင် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေးမူကို ထောက်ခံရေး တို့ တွင် ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ သဘောတူညီမှုများရရှိထားပြီးဖြစ်သည့်အလျှောက် ဤမူများကို ကိုင်စွဲကာ အဖွဲ့အစည်း တည်တန့် ခိုင်မြဲရေးအတွက် ဆက်လက် ကြိုးပမ်းသွားကြမည် ဖြစ်ပေသည်။
ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့အစည်း (AUN-Japan)၏ ရုံးခန်းကို ဂျပန်အစိုးရ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဌာန(လ၀က) မှ တရားဝင်လာရောက်ပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း တာဝန်ရှိသူမှ ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်း မှတ်တမ်း။
ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ အစည်း(ဂျပန်)ရုံးဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်ပိုင်း အဖွဲ့ အစည်းတည်နေရာ ရုံးခန်းဖြစ်သော 303 Mezonmashuukaku,2-24-8 Higashi Ikebukuro, Toshimaku,Tokyo 170-0013 , Japan နေရာတွင် ဂျပန် လ၀က အရာရှိများတို့ မှ ရောက်ရှိလာပြီး အဖွဲ့အစည်း၏အင်အား ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှုအခြေအနေများ ရုံးလုပ်ငန်း လည်ပတ်မှုနှင့် ရုံးသုံးပစ္စည်း မေးမြန်းစုံစမ်းပြီး AUN-Japan မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များက ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြပါသည်။
ဤ AUN-Japan ရုံးခန်း ၏ နေရာကို ဦးမိုင်ကျော်ဦးနေအိမ်တွင် အခမဲ့ ကူညီပေး အသုံးပြု စေခဲပြီး ရုံးပစ္စည်းများနှင့် ရုံးကုန်ကျစရိတ်လည်ပတ်မှုများကိုလည်း ( ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်မှ
၂၀၀၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ အထိ ဦးမိုင်ကျော်ဦး မှ AUN-Japan ကို ပံ့ပိုးကူညီ ခဲ့ပါသည်။
မှတ်တမ်း ။ Mai Kyaw Oo (PNS-Japan)
Posted by PNSjapan at 5:08 PM0comments
NCGUB နှင့် AUN-Japan တွေ့ ဆုံပွဲ အခမ်းအနား အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
PNS-Japan/NDF(Burma)Rep; Japan လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်း
၂၀၀၅ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၂)ရက်နေ့ 
ဂျပန်နိူင်ငံသို့ ခေတ္တရောက်ရှိလာသော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိူင်ငံ အမျိုးသားညွန့် ပေါင်း အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာစိန်ဝင်း နှင့် ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ အစည်း(ဂျပန်)တွေ့ ဆုံပွဲအခမ်းအနား အစည်းဝေး မှတ်တမ်း
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) ဥက္ကဌဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောဘိုလ်မြ ၏ (၁) လပြည့်အောက်မေ့သတိရ ဂါရ၀ပြု ဆုတောင်းပွဲအခမ်းအနား
၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ (၁၄)ရက်နေ့ 
KNU;RepJapan မှ ဦးစီး ကြီးမှုးကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိူင်ငံ အမျိုးသားကောင်စီ (NCUB) ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု(NDF) ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောဘိုလ်မြ ၏ (၁) လပြည့် အောက်မေ့သတိရ ဂါရ၀ပြု ဆုတောင်းပွဲအခမ်းအနား
မှတ်တမ်း ။ Mai Kyaw Oo (PNS-Japan /NDF(Burma)Japan- Rep;)
(ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ)မှ မြန်မာနိူင်ငံကို အရေးယူမှုအား ဆန့် ကျင်သည့်ပေါ်လစီနှင့် ပါတ်သက်၍ မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်း
ဂျပန်နိူင်ငံ အမတ်များသမဂ္ဂအချုပ်က ဂျပန်နိူင်ငံ နိူင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန (အာရှနှင့်ဖစ္စိဖိတ်ရေးရာဌာန)ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်အားခေါ်ယူ၍ မြန်မာနိူင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိူင်ငံ နိူင်ငံခြားရေး ပေါ်လစီသည်(ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ)မှ မြန်မာနိူင်ငံကို အရေးယူမှုအား ဆန့် ကျင်သည့် ပေါ်လစီနှင့် ပါတ်သက်၍ မေးမြန်း စုံစမ်းခြင်း အစီရင်ခံစာ
၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇွန်လ(၁၅)ရက်
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှ အလွတ်သဘောတွေ့ ဆုံသည့်အစည်းဝေး၌ ဂျပန်နိူင်ငံအနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အရေးဖြင့် မြန်မာနိူင်ငံ ပြဿနာအား လုံခြုံရေး ကောင်စီ၌ မတင်သင့်သေးကြောင်းနှင့် အချိန်လည်း မတန်သေးကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ခြင်းအပေါ် ၂၀၀၆ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၅ ရက် နေ့တွင် မြန်မာ့အရေး ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသော ဂျပန်အမတ်သမဂ္ဂအဖွဲ့ ချုပ် နှင့် ဂျပန်အစိုးရ၏ နိူင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရုံးရှိ တာဝန်ခံများအား ဂျပန်နိူင်ငံလွတ်တော်သို့ဆင့်ခေါ်၍ မေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ လွတ်တော်တွင် အပြန်အလှန် မေးမြန်း ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း မြန်မာ့ရေးရာရုံး ဦးဆောင် ကော်မတီဝင်များ နှင့်အတူ NDF ဂျပန် ကိုယ်စားလှယ်အနေ နှင့်လည်း တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်။
ဂျပန်နိူင်ငံ နိူင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန (အရှဖစ္စိဖိတ်ရေးရာဌာန) ညွန်ကြားရေးမှုးချုပ် မှ….ကုလသမဂ္ဂ
လုံခြုံရေးကောင်စီ ၌ ဆွေးနွေးခြင်းသည် အလွတ် ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်သဖြင့် ရှေးရိုး သတ်မှတ်ချက်အရ ဖြစ်သည် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီသို့တင်သွင်းသည့် တရားဝင် ဆွေးနွေးသင့်သည့် တရားဝင်အချက်အလက်များအပေါ်မှုတည်၍ ပြောဆိုခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ တရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ပေါ်လာပါက စဉ်းစားနိူင်မည် ဖြစ်ကြောင်း အရိပ်အမြွတ် ပြောဆိုသွားပါသည်။
ယင်းဆွေးနွေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ….ဂျပန်နိူင်ငံ အမတ်များ သမဂ္ဂများအဖွဲ့ ချုပ်အနေဖြင့် သဘောမတူနိူင်ကြောင်း မြန်မာ့အရေး နှင့်ပတ်သက်လာလျှင် အမေရိကန်နှင့် ပူးတွဲ လုပ်ဆောင် သွားသင့်ကြောင်း ကို ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီဥက္ကဌ Mr.Hatayama yukio က ပြင်းပြင်း ထန်ထန် တောင်းဆိုသွားပါသည်။
ဂျပန်နိူင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း Mr.Hata Tsutomu က ဂျပန်နိူင်ငံ၏ ပေါ်လစီသည် မြန်မာနိူင်ငံ အရေး၌ ပြတ်ပြတ် သားသား မရှိသောကြောင့် ဒီမိုကရေစီ ရရှိနိူင်ရေးအတွက် ပြတ်ပြတ် သားသား ထောက်ခံသင့်ကြောင်း တောင်းဆိုသွားပါသည်။
အာဏာရပါတီ၏ ဥက္ကဌဖြစ်သော Mr.Ooshima Tatamori က မြန်မာနိူင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် တင်သွင်းရေးအတွက် ထောက်ခံသင့်ပါသည်ဟု ပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်။
ဂျပန်အမတ်များ သမဂ္ဂအဖွဲ့ ချုပ်၏ ဒုဥက္ကဌဖြစ်သော Mr.Zuzuki Tsuneo က ဂျပန် နိူင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးနှင့် ရင်းနှီးသော ရဲဘော်ဖြစ်သဖြင့် ထို ဒုဥက္ကဌ မှတဆင့် စီစဉ်၍ ဂျပန်နိူင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သော Mr.Aso Taro နှင့် အမြန်ဆုံးတွေ့ ဆုံပြီး မြန်မာနိူင်ငံအား ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီ တင်သွင်းရာတွင် ဂျပန်အစိုးရအနေဖြင့် ထောက်ခံ တောင်းဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
ဂျပန်အမတ်များ သမဂ္ဂအဖွဲ့ ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမျူးချုပ် Mr.Yoshinori Suematsuမှမြန်မာနိူင်ငံအရေးအား ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ တင်သွင်းရာတွင် ဂျပန် အစိုးရအနေဖြင့် မထောက်ခံ ခဲ့ရင်တောင်မှ မကန့် ကွက်ဘဲ ကြားနေပေးရန် တောင်းဆို သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား သွားပါသည်။
ထိုအပြင် ကွာလာလမ်ပူမြို့ ၌ နိူင်ငံတကာ အမတ်များညီလာခံသို့ ပထမဆုံးအနေဖြစ် တက်ရောက်မည်ဖြစ်
ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိူင်ငံနှင့် ထိုင်းနိူင်ငံ နယ်စပ်ဒေသရှိ ဒုက္ခသည်ဝင်ရောက် လာနေခြင်းကြောင့် တတိယနိူင်ငံ မှခေါ်ယူ နေသော်လည်း ဂျပန်နိူင်ငံ အနေဖြင့် ဘာမှတုန့် ပြန်မှုမရှိသည့် အပြင် ဂျပန်ပြည်တွင်း ဒုက္ခသည်များ၏ အခြေအနေများကိုလည်း တင်းကျပ်ထားမှုအပေါ် ဂျပန်နူင်ငံအနေဖြင့် နိူင်ငံတကာနှင့် ယဉ်လျှင် အလွန်ရှက်စရာကောင်း ကြောင်း ဒုက္ခသည်များအား
ခေါ်ယူသင့်ကြောင်း အမြဲတမ်း လုံခြုံရေး ကောင်စီဝင်အဖြစ် ကြိုးစားနေမှုအပေါ် သုံးသပ်မိကြောင်းကို PFB အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး Mr.Watanabe Shogo ကတင်ပြသဖြင့် ဂျပန်အမတ်များ သမဂ္ဂ အဖွဲ့ ချုပ်မှ တရားရေး ၀န်ကြီးနှင့်တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးနိူင်ရန် အတွက် စီစဉ် မိတ်ဆက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂျပန်နိူင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြောဆိုချက်အရ မြန်မာနိူင်ငံ၏အခြေအနေများတွင်….
(၁) မြန်မာနိူင်ငံကို နိူင်ငံတကာနှင့်အထီးကျန်မဖြစ်ရေး။
(၂) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအ့မန်ဆုံးလွတ်ပေးရေး။
(၃) တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီရေး ထိုအကြောင်း ၃ ချက်ထဲတွင် အဓိကဖြစ်သော နံပါတ် ၁ အချက်ဖြစ်သည့် မြန်မာနိူင်ငံကို နိူင်ငံတကာနှင့် အထီးကျန် မဖြစ်ရေးကို စစ်တပ်အကြီးအကဲများအား တိုက်တွန်း သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂျပန်လွတ်တော်တွင် အထက်ပါ မေးမြန်းစုံစမ်း ဆွေးနွေးပွဲကို NCUB ကိုယ်စားလှယ် မြန်မာ့ ရေးရာရုံး ညွန်ကြားရေးမှုး Dr.Min Nyo ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်စု(NDF) ဂျပန် ကိုယ်စားလှယ် မိုင်ကျော်ဦး၊ NLD-La(JB)အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ဦးသောင်းမြင့်ဦး၊ LDB အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ဦးမြင့်မောင် ၊ FTUB ဂျပန်တာဝန်ခံ ဒေါ်ခင်ဆွေအေး၊ PFB အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးရှေ့ နေ Mr.Watanabe Shogo နှင့် ဂျပန်နိူင်ငံ အလုပ်သမားများသမဂ္ဂအဖွဲ့ ချုပ် Rengo မှတာဝန်ခံများမှလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာ့ရေးရာရုံး Burma Office (ဂျပန်) တိုကျို ၌ထူထောင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း မှတ်တမ်း
မြန်မာ့ရေးရာရုံး (ဂျပန်) တိုကျို ၌ထူထောင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း မှတ်တမ်း
BURMA OFFICE – JAPAN ( BOJ )
မြန်မာနိူင်ငံအား စစ်တပ်မှ အုပ်ချုပ်နေသည်မှာ ဆယ်စု ၃ ခုကျော် နေပြီဖြစ်သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှစ၍ စစ်တပ်သည် ဥပဒေ ပြုကျင့်မှုများအား ပိုမိုလုပ်လာနေခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲသည့် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကိုလည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများသည် ငြင်းပယ်လျက် ရှိပေသည်။
မြန်မာနိူင်ငံသူ နိူင်ငံသားများမှု နိူင်ငံရေးနှင့် စီးပွါးရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး မရှိသည့်အပြင် လူအခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှု များကိုသာ တိုးမြင့် ခံစားနေရပါသည်။ လူမျိုး၊ဘာသာမရွေး ဒုက္ခနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။
စစ်အစိုးရသည် မိမိ အာဏာချုပ်ကိုင်မှု ဆက်လက် တည်တံ့ရေးအတွက် ဂျပန်ကဲသို့ သော အစိုးရထံမှ ငွေကြေး ထောက်ပံမှုများ ရရှိရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိ၏။ ဂျပန်အစိုးရ သည်လည်း မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရေး အတွက် ရှင်းလင်း ရပ်တည်ခြင်း မရှိသည့်အပြင် စစ်အစိုးရအား အချိန်ကာလ သင့်လျော်မှု မရှိသေးပဲနှင့် ထောက်ပံ့မှုများ အထူးသဖြင့် လွန်ခဲ့သည့် ၄ နှစ်မှစ၍ ပြုလုပ်လျက် ရှိပေသည်။
မြန်မာနိူင်ငံ၏ ပြဿနာအား ဖြေရှင်းရန်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုခြင်းကို အားပေးခြင်းမျိုး မဟုတ်ပဲ နိူင်ငံရေး နည်းဖြင့်သာ ပြုလုပ်ရမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်သည်။ ထိုကြောင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ များဖြစ်ကြသည့်
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိူင်ငံအလုပ်သမားများသမဂ္ဂအဖွဲ့ ချုပ် (FTUB) ၊
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် လွတ်မြောက်နယ်မြေ-ဂျပန်ဌာနခွဲ့( NLD-LA Japan Branch ) ၊
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု ( ဂျပန်-ကိုယ်စားလှယ်) နှင့် အမြင့်ပြန်အဖွဲ့ တိုသည်
ဂျပန်အလုပ်သမားသမဂ္ဂ အဖွဲ့ ချုပ် ( JTUC-Rengo ) နှင့် ဂျပန်နိူင်ငံသား လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် ဗမာ့ရေးရာပြည်သူ့ အဖွဲ့( PFB ) နှင့်အတူတကွ ပူးကေါင်းလက်တွဲကာ မြန်မာနိူင်ငံတွင်း လူအခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်ခံရမှု အခြေအနေမှန်များနှင့် အခြေခံ အခွင်အရေးများ ငြင်းပယ် ခံနေရမှုများအား ဂျပန်အစိုးရနှင့် ဂျပန်ပြည်သူများ သိရှိစေရန် ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုအတွက် ဦးတည် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မည်သည့် အဖွဲ့ အစည်းမဆို ဤရုံးအား အသုံးပြုနိူင်သည်။
ဤ ရုံးသည် မြန်မာနိူင်ငံနှင့် ပတ်သက်သည့် စစ်မှန်သော အချက်အလက်များ၊ သတင်းများအား ဂျပန်အစိုးရ အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်းများ(NGOs)၊ သမဂ္ဂများ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ၊ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းများ၊ ဂျပန်နိူင်ငံနှင့် အခြားနိူင်ငံများရှိ မြန်မာ အသိုင်းအ၀ိုင်းသို့ဖြန့် ဖြူးသွားမည်။ မြန်မာနိူင်ငံအား ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားသောနိူင်ငံ အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရေး၌ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးသော နည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက် မှုများအား ဤရုံးမှ ကူညီ ပံ့ပိုးပေးသွားမည်။
ဤ ရုံးသည် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုအားလုံး၏ အခွင့်အရေးနှင့် နိူင်ငံရေးအရ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများ အား အပြည့်အ၀ထောက်ခံသွားမည်။ ဒီမိုကရေစီ စည်းမျဉ်းများအပေါ် အခြေခံ၍ ဖွဲ့ စည်းထားသည့် မည်သည့် အဖွဲ့ အစည်းနှင့်မဆို၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့ အခွင့်အရေးအား ယုံကြည်သော မည်သူ တဦးတယောက်နှင့်မဆို ကျွှန်ုပ်တို့ သည် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်။
မြန်မာ့ရေးရာရုံး ( ဂျပန် )
Burma Office ( Japan )
2-6 Kanda-Awaji cho,Awoji Bld 5F,CHIYODAKU,TOKYO,101-0063 Tel;8135296 3010
မှတ်တမ်း။ Mai Kyaw Oo
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု ( ဂျပန်-ကိုယ်စားလှယ်)
ဂျပန်နိူင်ငံသို့ ပထမ အကြိမ် Lobby ခရီးစဉ် မှတ်တမ်း
ညီညွှတ်သော တိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ အစည်း (ဂျပန်) Association of United Nationalities in(Japan) မှ တာဝန်ယူ ၍ နှစ်စဉ် ဂျပန်နိူင်ငံတွင် ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်း အနား ကို ကျင်းပလာခဲ့ပါသည်။ ယခု လာမည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် (၆၁)နှစ် မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားမှာ ယခင် ကျင်းပ လာသည့် နှစ်များနဲ မတူတော့ပဲ ပြည်ထောင်စုရဲ့ အနှစ်သာရ ကို ပိုမိုပေါ်လွှင်စေရန် အတွက် AUN-Japan မှ အဖွဲဝင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု အသီးသီးတို့ သည် မိမိ တို့ ၏ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်များကို ဂျပန်နိူင်ငံတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်မည့် ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနားကို တက်ရောက် နိူင်ရန် အတွက် ဖိတ်ခေါ်ကြ ရန် စီစဉ် ဆုးံဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။
ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားကို တက်ရောက်လာကြမည့် ခေါင်းဆောင် ကိုယ်စား လှယ်များ၏ နေထိုင် သွားလာ ခရီးစရိတ်များကို AUN၏ ရံပုံငွေ အခက်အခဲ့နှင့် တခြား အကူအညီ ပေးနိူင်မည့် အဖွဲ့ အစည်းမရှိသည့် အတွက် မိမိတို့ ဖိတ်ခေါ်သည့် ခေါင်းဆောင် ကိုယ်စားလှယ် တော်များ၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို မိမိတို့ တဖွဲ့ ခြင်းသာလျှင် တာဝန်ယူသွားကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ညီညွှတ်သောတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ အစည်း (ဂျပန်) တွင် ပလောင်အမျိုးသားများ ကိုယ်စား ဂျပန်နိူင်ငံတွင် ( ပလောင်အမျိုးသားများအဖွဲ့ (ဂျပန်) Palaung National Society -Japan ) မှ တာဝန်ယူ ရပ်တည်ခဲ့သည်။ အခက်အခဲ့ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြားထဲမှ တခြားသော တိုင်းရင်းသားများ နည်းတူ မိမိတို့ ခေါင်းဆောင်ကို တာဝန်ယူ ဖိတ်ခေါ် နိူင်ခဲ့ပါသည်။
ဂျပန်နိူင်ငံ ခရီးစဉ်တွင် ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနားအပြင် ဂျပန်အစိုးရ မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ ဂျပန်လွတော် အမတ်များ နိူင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ မြန်မာ့အရေးကို စိတ်ဝင်စားကြသည့် ဂျပန် NGO အဖွဲ့ အစည်းများ ဂျပန်ရောက် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ နှင့် တိုင်းရင်းသား အင်အားစုများတို့ ကို တွေ့ ဆုံနိူင်ခဲ့ပါသည်။ထိုတွေ့ ဆုံပွဲ အခမ်းအနားများ တက်ရောက်လာကြသည့် ခေါင်းဆောင် ကိုယ်စားလှယ် အသီးသီးတို့ သည် မိမိတို့ ဒေသအလိုက် လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသော နိူင်ငံရေး အခြေအနေများ စစ်အုပ်စုမှ တိုင်းရင်းသားဒေသ အတွင်းကျူးလွန်ခဲ့သည့် လူအခွင့်အရေး ကိစ္စများကို တင်ပြဆွေးနွေးနိူင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအပြင် ဂျပန်အစိုးရမှ မြန်မာနိူင်ငံ ကို ပေးနေသည့် လူသားခြင်း စာနာထောက်ထားသည့် အကူအညီသည် အမှန်တကယ် ဒုက္ခရောက်သည့် တိုင်းရင်းသား ဒေသများတို့ မရောက်ရှိခဲပါ။ ဂျပန်အစိုးရမှ အမှန်တကယ် အကူ အညီပေးလိုပါက တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပေးပို့ စေလိုကြောင်းကို တင်ပြ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါသည်
သတင်းမှတ်တမ်း ။ ။ မိုင်ကျော်ဦး(PNS-Japan) / NDF(Rep,Jp)
( 11- 8-2009 ) တိုကျိုမြို့ စစ်အခွန်ရုံးရှေ့ထိုင်သပိတ်ဆင်နွဲသည့် ဆန္ဒပြပွဲ။
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု မတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းအပေါ် တိုကျိုမြို့ဆန္ဒပြပွဲ။
Posted by PNSjapan at 1:51 AM0comments
AUN-Japan ( Foundres / Policy and Strategy Committee) နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် အမည်စာရင်း
(AUN-Japan) စတင်ဖွဲ့ စည်းတည်ထောင်ခဲ့စဉ်က ၂၀၀၃ ခုနှစ် မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ် အထိ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း။
မှတ်တမ်း ။ ။ Mai Kyaw Oo (PNS-Japan)
၂၆ - ၄ -၂၀၀၈ တိုကျိုမြိုမြန်မာ့စစ်အခွန်ရုံးရှေ့မှတ်တမ်း (၅)
၂၆ - ၄ -၂၀၀၈ တိုကျိုမြိုမြန်မာ့စစ်အခွန်ရုံးရှေ့မှတ်တမ်း (၄)
၂၆ - ၄ -၂၀၀၈ တိုကျိုမြိုမြန်မာ့စစ်အခွန်ရုံးရှေ့မှတ်တမ်း (၃)
၂၆ - ၄ -၂၀၀၈ တိုကျိုမြိုမြန်မာ့စစ်အခွန်ရုံးရှေ့မှတ်တမ်း(၁)
Posted by PNSjapan at 7:22 PM0comments
၂၆ - ၄ -၂၀၀၈ တိုကျိုမြိုမြန်မာ့စစ်အခွန်ရုံးရှေ့မှတ်တမ်း (၂)
Posted by PNSjapan at 7:15 PM0comments
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ တပ်ပေါင်းစု အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ဗိုလ်မှုးကြီးခွန်ဥက္ကာ ဂျပန် စည်ရုံးရေးခရီးစဉ်
၂၀၀၉ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့ 
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု(NDF) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှုးကြီးခွန်ဥက္ကာ ဂျပန်နိူင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာပြီး နိူင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန မှ အရှတာဝန်ခံ Mr.Hiroshi INOMATA / မြန်မာ့အရေး တာဝန်ခံ Deputy Director Mr.YAZAMA Hideyuki တို့ နှင့် သွားရောက်တွေ့ ဆုံပြီ မြန်မာနိူင်ငံ၏ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော နိူင်ငံရေးအခြေအနေများ နှင့် အပစ်ခတ်ရပ် အဖွဲ့ များ၏ သဘောထားများ ကို ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
ထိုသို့ သွာရောက်တွေ့ ဆုံသည့် အခမ်းအနားမှာ ဂျပန်လွတ်တော်အမတ်များသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး Mr.Suemasu YOSHINORI , ဂျပန်အလုပ်သမားများသမဂ္ဂ ညွန်ကြားရေးမှုး Mr.Masayuki SHIOTA ,မြန်မာ့ရေးရာရုံး တာဝန်ခံ NCUB
ဂျပန်ကိုယ်စားလှယ် Dr.Min Nyo, NDF ဂျပန်ကိုယ်စားလှယ် Mai Kyaw Oo တို့ မှ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
မတ်လ ၄ ရက်
မြန်မာ့နိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားအရေးကိူ စိတ်ဝင်စားပြီး အမြဲအကူအညီပေးသည့် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ
ှ Mr.Masaharu NAKAGAWA အား ညီညွတ်သောတိုင်းရင်သားများအဖွဲ့ အစည်း(ဂျပန်) မှ တာဝန်ခံ
များနှင့်အတူ သွားရောက်တွေ့ ဆုံစဉ်။
မတ်လ ၈ ရက်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်လွတ်မြောက်နယ်မြေ ( ဂျပန် ဌာနခွဲ )NLD-LA(JB) နှင့်
ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ အစည်း(ဂျပန်) AUN-Japan အဖွဲ့ များနှင့်တွေ့ ဆုံပြီး လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ပြည်တွင်းပြည်ပ နိူင်ငံရေးအခြေအနေ သုံသပ်ဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနား ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
NDF(Burma) ဂျပန် ကိုယ်စားလှယ်
ဒီစာကို Select ပေးပြီးရေးပါ
AUN-Japan ဖွဲ့ စည်း တည်ထောင်ခြင်း အပေါ် UNLD-LA မှ ၀မ်းမြောက်ကြောင်း ပေးပို့ လာသည့်စာ
၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၃ ရက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေး တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲ (တိုကျို)
(၂၁)နှစ်ပြည့်မြောက် ၈၈၈၈ ရှစ်လေးလုံး အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား (တိုကျို)